T & D5, UKUBUKWA KWE-PANAROMIC, OKUTHOKOMELE, OKUNETHEZEKILE, NGOKUPHELELE - I-Airbnb
T & D5, UKUBUKWA KWE-PANAROMIC, OKUTHOKOMELE, OKUNETHEZEKILE, NGOKUPHELELE
Quận 1, Hồ Chí Minh, i-Vietnam
Ikamelo e-i-townhouse ibungazwe ngu-Divyansh
U-Divyansh Ungumbungazi ovelele
- Ngenxa yobhubhane nokuphepha okuqhubekayo, izivakashi ezigonywe ngemibono engu-2. Ukwamukela zonke izivakashi ngezinga
lokwaneliseka elingu-100% Indawo ephakathi NENDAWO
-ART-DECOR & IGUMBI
elikhanyayo - izisebenzi
zigonyiwe - iyatholakala 24*7 ngezinkinga zakho.
# # Indawo Ephelele
Ifulethi lethu litholakala enkabeni yedolobha futhi lithatha nje imizuzu embalwa ukuya kuzo zonke izindawo ezithandwayo (i-Benwagenh Market, i-Bui Vien Walking Street, i-Fant Wu Street, i-Nuyen Hue Boulevard, i-Dragon Wharf, i-Municipal Theater, i-Ho Chi Minh UMongameli Statue...). Ukuze sizungezwe i-bistro yasendaweni eyaziwayo kanye nezindawo zokudlela futhi ikakhulukazi emgwaqweni odumile wokudla kwasebusuku, siyaqiniseka ukuthi asikho indawo engcono kuneyethu ongathola futhi ujabulele isiko lokupheka lendawo. Ifulethi liklanywe ngomqondo wobuhle, ukunethezeka kanye nezinga eliphezulu.
Kuthenjisiwe ukukunikeza umuzwa wokuhlala ekhaya elikude nasekhaya, futhi kuzoba indawo enhle yokukhosela abantu abashadile noma umndeni omncane ukuze ufihle kuleli dolobha eliphithizelayo.
4.80 · 132 okushiwo abanye
Ikhaya lisenhliziyweni yedolobha futhi konke kuyafinyeleleka emizuzwini engu-5. Ngaphandle nje kwendawo yokudlela, kukhona indawo yokudlela yokudla kwasolwandle enezincomo ezimangalisayo. eseduzane inenxanxathela yezitolo zokuthenga (manje yindawo) enenqwaba yokudla futhi inendawo yemidlalo yaseshashalazini. Uma uthanda ukuya emcimbini noma i-bui vien itholakala emaminithini angu-4 kuphela ukusuka endlini. Ngaphandle kwalokho, njengoba uzobe uhlala esifundeni-1 zonke izindawo zokuvakasha ziseduze
UDivyansh Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Quận 1 namaphethelo